အုန်းနို့/နို့စိမ်း/မြိတ်/ထားဝယ်/ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » အုန်းနို့/နို့စိမ်း/မြိတ်/ထားဝယ်/ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ – KZ’s ထမင်းဆိုင်	23
အုန်းနို့/နို့စိမ်း/မြိတ်/ထားဝယ်/ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Sep 7, 2015 in Food, Drink & Recipes, How To.. | 23 comments
ကျနော် တင်တဲ့ ပုံစံတွေ ခုလောက် ဆို နည်းနည်း သဘောပေါက်လောက်မှာပါနော့။
အမျိုးတူရာ ဆင်ရာ အုပ်စု တူရာတွေ ရွေးစုပြီး တင်တတ်တာမို့ ဒီ တစ်ပတ်လည်း ခေါက်ဆွဲတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ
ဂျုံခေါက်ဆွဲနဲ့ အုန်းနို့ဟင်းရည်၊ ပဲနို့ ဟင်းရည်၊ နို့စိမ်းဟင်းရည် စတာတို့နဲ့ ချက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ အုပ်စုလေးကို စုထားပါတယ်။
ထားဝယ် ခေါက်ဆွဲ (ဦးကျောက်ခဲ ချက်သည်။ နှင်းမမ ဓာတ်ပုံပေးသည်)
အနှီ ထားဝယ်ခေါက်ဆွဲရဲ့ ရာဇဝင်က ဂလိုဗျ…
ကျောက်စ်ရဲ့ ဘူမိကျောင်းဖော် ငယ်သူငယ်ချင်းက ထားဝယ်သား ၊ ၁၀-တန်းရောက်မှ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းလာတာပါ ။ သူက ညီအကို မောင်နှမ ၁၁-ယောက်မှာ အငယ်ဆုံးသားခင်ဗျ ။ ပိတ်ရက်ဆို အင်းစိန်ကြို့ကုန်းက သူတို့အိမ်မှာ လူအပြည့်ပဲ ။ လူစုံရင် သူ့အမတွေ မရီးတွေ ချက်လေ့ရှိတာ ဒီခေါက်ဆွဲအရည်ကျဲပါပဲ ….။ သူတို့ချက်နည်းက…
ကြက်သားကို မှုန့်နေအောင် ထောင်းထားတဲ့ သကြားအညိုရယ် ဆားရယ်နဲ့နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ ။ အိုးတလုံးမှာ ရေသင့်ရုံထည့် ၊ ရေဆူရင် ကြက်သားကို ဂျင်းဓားပြားရိုက်ရယ် ပူဒီနာအရိုးတွေရယ်နဲ့ ပြုတ်ပါတယ် ။ ကြက်သားနူးသွားရင် ပြန်ဆယ်ပြီး အသားနွှင် ၊ အရိုးကို ပြန်ထည့်ပြုတ် ၊ ပြီးရင် သန့်စင်ထားတဲ့ ပြည်ကြီးငါး (ကင်းမွန်) နဲ့ ငါးကွမ်းရှပ် အသားထောင်း ငါးဆုပ်ပြား ကို အဲသည့် ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲမှာပဲ ပြုတ်/ပေါင်း ပါတယ် ။ ကျက်သွားရင် ပြန်ဆယ်ပြီး နုတ်နုတ် တုံး ၊ ကြက်ပြုတ် ပြည်ကြီးငါး ငါးဆုပ်ပေါင်းပန်းကန်တွေကို သက်သက်စီ ခွဲထားပါတယ် ။ ပြီးမှ ခုန အပြုတ်ရည်ဆူဆူထဲကို အုန်းနို့ရည်ထည့် ၊ အရသာ အချို အငံ ပြင် ၅-မိနစ်လောက် ပွက်ပွက်ဆူပြီးရင် ရပါပြီ ။ (သူတို့ အော်ရီဂျင်နယ်က အတော်ချိုသဗျ)
စားတော့မယ်ဆိုရင် ဇလုံထဲကို ဂျုံခေါက်ဆွဲ ၊ နုတ်နုတ်စဉ်းထားတဲ့ အသား ငါးတွေ ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ပဲပင်ပေါက်ပြုတ် ၊ ပူဒီနာနိုင်းချင်း ၊ ညှပ်ထားတဲ့ ပဲပြားကြော် ၊ ငါးမုန့်ကြော်/ဝက်ခေါက်ကြော် ၊ ငရုပ်သီးခွဲကြမ်း ဆီသတ် ၊ ပဲငပိ အချိုချက်တွေထည့် ၊ အချဉ်ညှစ်ပြီး တွယ်တော့တာပဲ ။ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲတို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတို့ မလေး Laksa တို့နဲ့လည်းမတူ … အရသာ တမျိုးခင်ဗျ… စားကောင်းတယ် ။
ကျောက်စ်ကတော့ မွေးမြူရေးကြက်ကို ချက်ရတာမို့ အနံ့နံမှာစိုးလို့ ပဲငပိအချိုနဲ့ ဆီသတ်ပြီး (သကြား) အချိုလျှော့ချက်ပါတယ် ။ ပူဒီနာများများနဲ့စားတော့ သွေး သိပ်မတိုးတော့ဘူးပေါ့ဗျာ… ။ ချက်စားကြည့်ပါ… အမယ်များတာကလွဲရင် ချက်ရတာ လက်မဝင်ဘူး…
ဘူဖေးလို အားလုံးကို သက်သက်စီ ပန်းကန်လေးတွေခွဲပြီး ပြင်ထားပါ ။ ကိုယ်စားချင်တာကို စားနိုင်သလောက်ထည့်စားပေါ့ ။ စကားမစပ် … အဲသည့်ထားဝယ်သားတွေချက်ရင် အရည်ကျဲ အရသာပြင်းတွေများတယ် ။ မွင်းခါး အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို ဆန်လှော်မှုန့် ပဲမှုန့် ဘယ်တော့မှ ထည့်လည်းမချက် ၊ အပြင်မှာစားရင်လည်း ဟင်းရည်ပျစ်ရင် မျက်နှာပျက်နေရော ။ စားကျင့်မရှိဘူးတဲ့လေ….
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ (မွသဲ ချက်သည် ဓာတ်သေရိုက်ရန်ခုံပေါ်သို့တက်သည်။)
ခေါက်ဆွဲ – တပိသာ
ကြက်ရင်ဗုံ တခု နှစ်မွှာပေါ့ ( အရိုးအသား ၇၀ သားခန့် )
ကြက်သွန်နီ ၂၀ သား
ပဲမှုန့်အစိမ်း ၁၅၀ ဂရမ် ရေ ခြောက်လီတာနဲ့ဖျော်
ရေ 6-8 လီတာနဲ့ ပဲမှုန့်အစိမ်းကြေအောင်ဖျော်
ကြက်ရင်ဗုံကို အစိမ်းအတိုင်းအသားလွှာ… ခပ်သေးသေးတုံးထား ဆားနယ်ထား
ကြက်သွန်ဖြူထောင်းဆီသတ် ကြက်အတုံးထည့် ပါတဲ့ရေခမ်းအောင်လုံးထား
ကြက်သွန်နီခွာ လေးစိတ်စိတ် တဖတ်ချင်းခွာထား
ပဲရေဆူအောင်တည် ပစ်တယ်ထင်ရင်ရေနွေးထပ်ရော ကြဲကြဲလေးဖြစ်နေရမယ်
ပဲနံ့ပျောက်ရင် လုံးထားတဲ့ကြက်သားထည့်… ဆူအောင်တည် အရသာထည့်
မီးပိတ်ခါနီးခွာထားတဲ့ကြက်သွန်နီဖတ်တွေထည့် နဲနဲဆူခိုင်းပီးပိတ်ထားလိုက်တော့ (အခုဆိုင်မှာတောင်ကြက်သွန်ဖတ်ခွာတာမထည့်တော့ဘူး။ ကြက်သွန်ဈေးကြီးလို့ထင့်။ ငယ်ငယ်ကစားခဲ့တဲ့ အိုဆာကာရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲတွေတုန်းကပါတယ်)
အုန်းနို့စားရဲရင် ပဲဟင်းအိုးထဲတခါတည်းထည့်ချက်… မစားရဲသူပါရင် အုန်းနို့ရည်ကို ဥအောင်မီးဖိုပေါ်တင်မွှေ
အကြွပ်ကြော်အတွက် ရယ်ဒီမိတ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ထဲကခေါက်ဆွဲကို ဆီများများနဲ့ကြော်ထား
ကျန်တဲ့ကြက်ရိုးကို ဟင်းချိုအကြည်ချက်မယ် ကြက်သွန်မိတ်ခပ်မယ်
Note – အရည်များချင်ရင် ပဲမှုန့် ၂၂၅ ဂရန် မွှေးတထုပ်ခွဲပေါ့..ရေ ရှစ်လီတာဆိုရင်တော့ ပိုလောက်ငမယ်..ကြိုကက်တတ်ရင်ကြက်အသည်းမြစ်နှစ်စုံလောက်ထည့်
သတိထားရမှာက ဟင်းရည်ကအမြဲပူနေရမယ်… မွင်းငါးလောက်မများရ
အပေါ်ကအုန်းဆီ ငြုတ်ဆီ ပဲမှုန့်ထည့်
ရွှေတောင် ခေါက်ဆွဲ (မမှီ ရဲ့ လက်ရာ)
မယ်တူဂျာ ခေါ် မယ်ဝါးရဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲပါ (ဓာတ်သေကတော့ ကွကိုယ် ပြန်ရှာထားပါတယ်)
ဘဲဥပြုတ် အခွန်နွာ စိတ်ထားပါမယ်။
ကြက်သားကို ဆား အရောင်တင်မှုန့် မဆလာ ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူ ဟင်းခတ်မှုန့် တုိ့ နယ်ပီး နှပ်ထားပါမယ်။ ပြီးရင် ကြက်သွန်နီလှီးထဲ့ ဆီလောင်းထဲ့ ပီး မီးအေးအေးနဲ့ ဆီပြန်အောင် လုံးချက်ပါမယ်။
အုန်းနို့ကို ဆူအောင်ပြစ်ပြစ်လေးတည်။ ကြက်ခြေ ထောက်ခေါင်း တွေကို ပိုဝယ်လာပြီး ဟင်းထဲ ထဲ့ မချက်ပဲ အုန်းနို့ ထဲ ထည့်ပြုတ်ပါမယ်။
ကုလားပဲ အစိမ်းမှုန့် ကို ရေအရင် ပျော် အောင်ဖျော်ပီးမှ အုန်းနို့ရည် ထဲထဲ့ပါမယ်။
ခေါက်ဆွဲပြင်ရင် အုန်းနို့ ဟင်းရည်ထဲ့ ပီး ကြက်သားဟင်းထဲ့ ငါးဖယ် ဘဲဥ ထဲ့ပြီး ပြင်ရပါတယ်။
နေ့ခင်း ခေါက်ဆွဲ မစားချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အုန်းနို့ မစားတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထမင်းအိုး တစ်လုံးတည်ထားပီး ကြက်သားနဲ့ စားလို့ရပါတယ်။
မြိတ်ခေါက်ဆွဲ (အမွန် ပြေါပြတာ)
သူဌေးသူငယ်ချင်း လာကျွေးတာ . . .
၁၁ မျိုး ပါရမယ်တဲ့…
ပဲရည်ခေါက်ဆွဲ (ကေဇီ နည်း နဲ့ ဓာတ်သေ ကို မွဘုတ် အလစ်သုပ်လာပေး၍ Original Uploader ကို ခရက်ဒစ်ပေးသည်)
– ကြက်သားတွေချည်းပဲ ဆယ်ထားပြီး အရိုးအသား နွှင်ခိုင်းလိုက်ပါ။ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းကျအောင် နွှင်ခိုင်းတာ ဟုတ်ဘူးနော်။
– ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက်ကို အကျွတ်ကြော်ထားပြီး နည်းနည်းခြေထားး
– ကြက်သွန်နီ၊ ဂေါ်ဖီ၊ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ရှောက်ရွက်၊ ကြက်ဥပြုတ် ပါးပါးလှီးပြီး တစ်ပုံစီ ပုံထားလိုက်ပါဦး။။
– ပြီးတော့ ပဲသွေး/ဘဲသွေး၊ ကြက်သွန်ဥ အသေး စတာတွေပါ ထည့်ပြီး ဆက်ကျိုပါ။
– မီးဖိုပေါ်က ပဲရည် အပြစ်အကျဲ လိုသလောက်အနေတော် ပွက်ပြီဆိုပါက (တစ်ဦးချင်း အကြိုက်ပေါ်မူတည်၏) ပန်းကန် တစ်လုံးထဲတွင် ဂျုံခေါက်ဆွဲ ကြက်သားတုံး၊ အရိုးတုံးလေးများထည့်၊ ခုနက ပါးပါးလှီးပြီးသား အရာတွေထည့်၊ပြီးရင် ပဲရည်လေး ထည့်ကာ နယ်လိုက်ပါ။ အပေါ့အငံ ကိုယ်လိုသလိုပြင်ပြီးတာနဲ့ စားလို့ရပြီဖြစ်၏။
– အစပ်ကဲတာမှ ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးမှုန့်ပါ ထည့်လို့ရပါသည်။
မလေး ပဲနို့ ခေါက်ဆွဲ Soya Curry laksa (မွဘုတ် ချက် ၍ ဓာတ်ပုံပေး သည်)
Soya Curry laksa
ပဲနို့ရည် – ၅၀၀ မီလီလီတာ
ရေ -၂၀၀ မီလီ (ဆူရင်းခန်းဖို့)
ကြက် – လေးပိုင်းတစ်ပိုင်း
ကြက်သွန်နီ – နှစ်လုံး
ဖြူ – သုံးတက်လောက်
ပျဉ်းတော်သိမ် – ဆီသတ် ရန် အနည်းငယ်
ပဲပြား – တစ်ခု
ကြက်သားကိုအရသာနယ် ကြက်သွန်နီ ဖြူ ပျဉ်းတော်သိမ် ဆီသတ်နဲ့ ချက်ထားပါ။
ပဲနို့ရည် သကြားမပါတာ ဝယ်ပြီး ဆူအောင်ကြို
ပဲပြားကြော် ထည့်။ တချို့ လည်းပဲလိပ်ကြော် ထည့်ပါတယ်
အရသာမြည်းပြီး နို့စိမ်း နည်းနည်းပေါက်
ပဲတောင့်ရှည် ပဲပင်ပေါက် ရေနွေးဖြော
ငပ်ိကြော် နဲ့ စားပါတယ် .. (ကြက်သွန်နီ နှစ်လုံး ကြိတ်..ငရုတ်အပွခြေါက်ကို ကြိတ် ရောပြီး ကြွပ်အောင်ကြော် ငပိရော ရေနည်းနည်းထည့်)
နို့စိမ်း ခေါက်ဆွဲချက်နည်းလေးတော့ မိုးသူဆီက ဆွဲလာတယ်။
ကြက်ခြေထောင် လည်ပင်း အတောင်းပံ နှစ်ပိုင်းခုတ်
နို့စိမ်း သို့မဟုတ် အုန်းနိုး တစ်ဘူး
ပဲမှုန့်ကို ဘလန်ချာနဲ့ အရင်ညက်အောင်ဖျော်
ပဲရည်ကို မီးဖိုပေါ်တည် ပဲပါး ကြက်ရိုးအကုန်ထည့် ပြီးရင်မွှေပေး
ဟင်းခတ်မှုန့်ဆား သင့်သလိုထည့် ဆူလာရင် ကြက်သွန်ဥထည့် ဆီသက်ထားတာထည့်
ပြီးပြီ။ အပေါ်အနှစ်လေးတွေတက်လာတာကို နန်းကြ်းသုတ်ပေါ့။ :-)
သူကတော့ နန်းကြီးသုတ် အတွက်ရေးတာ။
ကိုယ်ကတော့ ခေါက်ဆွဲ အတွက်ယူလိုက်တယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: မှတ်ထားမယ်ကွယ် အဲ့ချက်နည်းတွေ…
ကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ ကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်တဲ့ အခါကျ ချက်စားမယ်။း)
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးနော်။
မီးဖို ရှယ်သုံးရရင်တော့ ချက်စားလို့ စိတ်အေးလက်အေးမရှိဘူးး
အောင် မိုးသူ says: အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတော့ကြိုက်တယ် ချက်ရင်လည်း ကြက်ခြောက်ထောက် တောင်ပံ ဒူးဆစ်ရိုးတွေ ထည့်ချက်တာ ပိုကြိုက်တယ် ဟိဟိ။
အရိုးတို့ အရေခွံတို့ ပါတာကြိုက်တယ်။
ခေါက်ဆွဲ စားပြီး အရိုးကိုက်လို့ရတယ်။
CharTooLan says: ဝမ်းနဲဇယာ ဂုခြေနေနဲ့ ကြက်သားစားမြဝူး :'(
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘာလို့တုန်းးး
CharTooLan says: ၃လကျော်ပီ အသားတွေစားမရဝူး တခြားအသားကတော်သေးတယ်
ကြက်သားကလုံးဝမရဝူး ဒါနဲ့ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ အစက
Mike says: .အိမ်ကဆိုင်မှာအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲရောင်းတယ်..တစ်ခါမှမစား..ကြောက်လို့
.ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲအော်ဒါရလို့ချက်ရင်တော့စာတယ်..ကြိုက်လို့ .မလေး ပဲနို့ ခေါက်ဆွဲ Soya Curry laksa ကစားချင်စရာလေး
အုန်းနို့ နဲ့ ရွှေတောင် ခေါက်ဆွဲ က အပြစ်အကျဲပဲ ကွာတာ ဟုတ်ဘူးလားးး
ဒီမှာ တော့ မလေး အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲရယ်လို့ စားရတာပဲ။
ကျော် တို့ ခေါက်ဆွဲတွေက ပိုကောင်းပါတယ်။
pooch says: အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကြိုက်တယ် မစားဖြစ်တာကြာပြီ
ဇီဇီခင်ဇော် says: မန်းလေးမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ကောင်းကောင်းမစားဖူးဘူးး
weiwei says: ငယ်ငယ်တုန်းက မုန့်ဟင်းခါးသိပ်မကြိုက်ပဲ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ် ..
အခု ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး မုန့်ဟင်းခါးကို ပိုကြိုက်သွားတယ် ..
ဒါပေမယ့် ခေါက်ဆွဲဆိုတာက ငယ်ချစ်လိုဖြစ်နေတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့သွားတယ်မရှိ ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်က ခုထိ မုန့်ဟင်းခါးမှ မုန့်ဟင်းခါး
မုန့်တီ၊ ဆန် ခေါက်ဆွဲတွေကို ပိုကြိုက်တာ။
ဂျုံခေါက်ဆွဲက ဒုတိယ ဦးစားပေး
kai says: Topping ပဲဆိုပါစို့..။
ဥပမာ..။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဆို.. ပဲကြော်။ ဘူးသီးကြော်၊ ဘဲသွေး… မုန့်ကြွတ်.. စသဖြင့်ပေါ့… စာရင်းလုပ်ထားချင်တာလေ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: စာရင်း လုပ်ပေးရမှာလားး
ဓာတ်ပုံ အတွက်ကျ အဲဒီ တော့ပင်းတွေတွေက အသားပေးရတယ်
kai says: တော်တော်အလုပ်ရှုပ်မယ်ထင်တယ်…။
ဒီလ သတင်းစာထဲ.. ဒီဟာတွေထည့်လိုက်ရမလား.. ?
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရတယ် လေ။
ခေါက်ဆွဲတွေက သတင်းစာ အတွက် စုတာပဲဟာ။
တော့ပင်းက စာရင်းပဲ ဆို ခုကို ရတယ်။
ဓာတ်သေကတော့ ကြာမယ် ရှာရမယ်။
ဟီးဟီး Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: ဓာတ်သေမလိုပါဘူးနော…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ဆို နောက်လ အတွက် စုထားပေးမယ်လေ။
ဒီ လတော့ ခေါက်ဆွဲတွေသာ ယူထားတော့၊
Ma Ma says: စားချင်စရာတွေချည်းပဲ။
ပြိုင်ပွဲလုပ်ခိုင်းပြီး ဒိုင်လုပ်ရရင်ကောင်းမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့နော်။
မမ ပွဲ စီစဉ်ရအောင်။
Kaung Kin Pyar says: ကျေးဇူးပါ မချွိရေ…
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကတော့ အရမ်းကြိုက်လို့ လုပ်စားကြည့်ချင်နေတာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမက ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကို ရွှေတောင်မြို့မှာ စားဖူးပြီးကတည်းက တခြားမှာ စားမရတော့တာ။